Ree Tether maka Google Pay- Gold Locker (MMTC-PAMP) | Paxful
Ree Tether jiri Google Pay- Gold Locker (MMTC-PAMP)
Otu esi ere Tether na Paxful
Na Paxful, anyị na enyere ndị mmadụ aka ịbịaru nnwere onwe ego wee bụrụ ndị isi onwe a. Nke a bụ ihe kpatara na mgbakwunye na Bitcoin, ị nwekwara ike ire Tether (USDT) ugbu a nye ihe karịrị nde ndị ọrụ atọ na gburugburu ụwa. Site na ịkwụ ụgwọ ego edebere ruo na azụchaa ahịa , nnwere onwe itinye ọnụego gị, yana usoro ịkwụ ụgwọ 300 nke ị ga ahọrọ, ahịa anyị nke ndị mmadu na akwado na eme ka ọ dị mfe onye ọ bụla ị nweta uru.
Iji malite, banye na Paxful ma ọ bụ banye na akaụntụ gị dị ugbu a ma soro nzọụkwụ ndị a:
Melite usoro nke ịkwụ ụgwọ ị họọrọ na ego na ị chọrọ ka a kwụọ ụgwọ na.
Pịa Chọọ ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa iji lelee ndepụta ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa na emezu ihe ịbanyere.
Mgbe ị na elele ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa , gee ntị na nkọwa niile. Nke a gụnyere akara ndị zụrụ ahịa, nnweta ha, yana ọnụego ndị a chọrọ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ezigbo njiko, ịnwere ike mepụta onyinye nke gị iji dọta ndị ọrụ nwere mmasị ịzụta Tether na usoro gị.
Ozugbo ịchọtara ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa masịrị gị, pịa Ree. Ọ gaghị amalite ahia ahụ ozugbo; kama, ị ga ahụ usoro na ọnọdụ nke onye na azụ ahịa.
Ọ bụrụ na ị kwenyere na usoro ndị ahụ, tinye ọnụọgụgụ ị chọrọ ịzụ wee pịa Ree Ugbu a. Nke a ga amalite azụmaahịa ahụ ma mee ka USDT gị gaa na usoro ego edebere ruo na azụchaa ahịa anyị nwere nchebe.
Rịba ama ntuziaka nke onye na azụ ahịa ma nye ozi dị mkpa na mkparịtaụka ndụ. Ozugbo ị natara ụgwọ ahụ, ịnwere ike ịhapụ USDT site na ego edebere ruo na azụchaa ahịa anyị banye n'ime akpa ego onye zụrụ ahịa, ma debe akwụkwọ azụmahịa ọha.
Mgbe ahịa ahụ gasịrị, tụlee ịhapụ nzaghachi nye onye zụrụ ya. Nke anaghi nani enyere ha aka iwulite aha ha, kamakwa n’enye ndị ahịa ndị ozo uche banyere ndị ha na ha na emeko.
Iji hụ na ahụmịhe azụmaahịa enweghị nchekasị, gụọ iwu maka ire Bitcoin na Tether. Ị nwekwara ike lelee ntuziaka maka imepụta iwu banyere ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa anyị ka ị nwee ike mepụta ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa a na apụghị igbochi egbochi maka ndị n'azụ gị ahịa.
N'ebe a na Paxful, anyị nwere usoro siri ike ebe ka ị nwee ike ịzụ ahịa n'enweghị nsogbu ọ bụla, ebe ọ bụla. Chọgharịa site na ọtụtụ puku ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa ziri ezi wee malite ire Tether taa!